RHA DACAMP, CL1 ary CL750, ny vahaolana RHA vaovao | Androidsis
Nandritra ny IFA farany teo tany Berlin, ary tato ho ato dia tao amin'ny AVME any Madrid, RHA dia nitondra ny vaovaony tamin'ity taona 2016 ity. Miresaka isika DACAMP L1 ary ireo maodely roa an'ny Ear Ear vaovao RHA CL1 sy RHA CL750. YNotsapainay teo aloha ny sasany amin'ireo vahaolana natolotry ny mpanamboatra, toy ny headphones manaitra azy ireo RHA T10 y RHA T20, Izahay izao dia mitondra anao ny fiheverana voalohany rehefa avy nanandrana ireo zava-baovao telo mahaliana an'ny mpanamboatra monina ao Glasgow.
Hanomboka amin'ny firesahana aho DACAMP L1, fanamafisam-peo DAC sy portable ho an'ny finday Izany dia namela ahy hiloa-bava rehefa nanandrana izany. Araka ny ho hitanao any aoriana, dia vokatra be indrindra ity ary mikendry ireo tena tia mozika, saingy miankina amin'ny andrasana ny vokany.
1 DACAMP L1, fitaovana tena tsara ary mahery
2 Fitsapana ny DACAMP L1 miaraka amin'ny kapila an-tsarimihetsika RHA CL750
2.1 DACAMP L1 endri-javatra
3 RHA CL1 sy RHA CL750
3.1 Toetra ara-teknika RHA CL1
3.2 Ny toetra ara-teknikan'ny RHA CL750
4 R Galeri Drafitra RHA DACAMP, RHA CL1 ary RHA CL750
DACAMP L1, fitaovana tena tsara ary mahery
Rehefa mandray ny vahaolana RHA vao voalohany ianao dia tsy ampoizina. ny vatana vita amin'ny aliminioma manome ny DACAMP L1 fikitika tena mahafinaritra. Tsy fantatray ny tena lanjany, saingy tsy nanelingelina ny tanako izany.
El Manolotra fihazonana tsara ny DAC ary fahatsapana faharetana lehibe. Azontsika atao ny mampiakatra sy mampidina ny feony amin'ny kodiarana izay manome fikitika mahafinaritra be dia be. Ankoatr'izay, ny fanaraha-maso mifehy ny bas, treble ary gain dia manome làlana mihoatra ny marina.
Matetika i RHA no miavaka kalitaon'ny vokariny rehetraAry tsy mahagaga, ny DACAMP L1 dia manolotra fijery sy fahatsapana fa mifanaraka amin'ny andrasana amin'ny vokatra orinasa iray.
Fitsapana ny DACAMP L1 miaraka amin'ny kapila an-tsarimihetsika RHA CL750
Ok, efa hitantsika fa toa mahavariana ny finday DAC finday vaovao an'ny RHA, saingy ahoana ny toa azy? Ny kalitaony raha ny amin'ny filalaovana feo dia avo lenta fotsiny. Izaho dia mampiasa headphones RHA T20 Black Edition, ny tsara indrindra nataoko tamin'ny resaka audio, ny fampifangaroana ny DACAMP miaraka amin'ireo headphones CL1-ndray dia mahatonga traikefa tsy mampino manamarika ny fihoaram-peon'ny orinasa britanika ankehitriny.
Nefa alohan'ny hilazako aminao ny zavatra niainako manokana tamin'ny DACAMP L1, avelako ho anao ny toetra ara-teknikan'ilay DAC azo entina mahery miaraka amina fanamafisam-peo.
DACAMP L1 endri-javatra
DUAL ESS ES9018K2M DAC sy rafitra kilasy misy amplifier AB
Fanohanana ny audio avo lenta miaraka amina endrika hatramin'ny PCM 32-bit / 384kHz sy DSD 5.6MHz
output headphone :: 4-pin Mini XLR (mahay mandanjalanja), 3.5mm
Fampidirana nomerika: USB A, USB B Micro, mini TOSLINK (optika)
Fifanarahana: Solosaina finday sy birao miaraka amin'ny rafitra fiasa Android, PC, Mac, iOS (voamarina ny MFi)
Bateria li-ion 4000mAh miaraka amin'ny fizakan-tena hatramin'ny 10 ora miaraka amin'ny asan'ny powerbank
Haavo telo ny tombony ary ny fanaraha-maso EQ ho an'ny basika sy ny treble.
Araka ny efa hitanao dia misy a tena fitaovana mahaliana. Ny zavatra voalohany ataoko dia ny fitsapana azy amin'ny kapila am-peo RHA T20i. Ny zavatra voalohany ataoko dia mampifandray ny headphones amin'ny DACAMP L1 amin'ny alàlan'ny port 3.5 mm ary amin'ny lafiny hafa ny smartphone. Manandrana aho satria ny findaiko dia manana output-C output. Olana voalohany. Soa ihany Jakub Dziewiecki, RHA Account Executive, no nanomana izany rehetra izany ary manolotra ahy a Type-C mankany adapter USB micro. Mandeha tsara izy. Eny, andao hanomboka hihaino mozika.
Ity no olana faharoa, I Manana ny mozika rehetra ao amin'ny Spotify aho Ka na dia apetrako amin'ny kalitao faran'izay avo aza ireo lisitra dia tsy azoko antoka fa ho hitako ny mahasamihafa azy. Te-hiantoka ny fitifirana aho ka manapa-kevitra ny hanandrana aloha ny hira roa izay henoiko matetika, ka ho hitako amin'ny voalohany ny fahasamihafana rehefa mihaino azy amin'ny DACAMP L1. Ny voalohany dia hira rap, milalao ny hira aho rehefa manitsy ny masontsivana bass sy treble amin'ny alàlan'ny Equaliser. Anjarako ve izany sa misy naoty vitsivitsy izay tsy hitako taloha? Toa somary mazava kokoa ny feony, saingy mbola tsy hitako ny fahasamihafana lehibe. Mandra-pahatongan'ny fanoloran'i Jakub ahy ny headphones vaovao RHA CL1.
Mihatsara ny feo, mahatalanjona ny kalitaon'ny feo ary manomboka mahatsikaritra ireo nuansa mozika tsy henoko akory aho teo aloha. Tena tsara izany. Misedra hira maromaro am-pitsikiana hatrany an-tsofina aho satria tsy miditra amin'ny masony fotsiny ilay vokatra, fa ny DACAMP L1 dia manome fampisehoana tsara. Maniry bebe kokoa aho. Nitraka aho ary nahita an'i Jakub teo akaikin'i Marina Schurer tamim-pitsikiana nahafantarana. Fantatr'izy ireo ny kalitaon'ny vokatr'izy ireo ary tsy te hampahory ahy izy ireo ka navelany hilalao vetivety aho alohan'ny hanolorany tena hihaino ny hira John Williams tsara indrindra amin'ny alàlan'ny mpilalao manana kalitao avo lenta. Napetrako ny headphones RHA CL1 ary nilalaovako ny feon-kira Star Wars. Eto dia efa miresaka ambaratonga hafa isika. Raha Spotify no hitako fa nisy fihatsarany, tsy azonao an-tsaina akory ny fahagagana azoko rehefa nanandrana hira avo lenta niaraka tamin'ny DACAMP L1 sy ny headphones-ny aho. Mifandanja tsara ny feo, manome audio tonga lafatra sy tsy misy tohika. Mozika marina ho an'ny sofina. Ara-bakiteny.
Aorian'ny fampiasana headphones avo lenta mifandraika amin'ny finday avo lenta sy mividy ny valiny azo tamin'ny DACAMP L1, azoko atao ny manome toky anao fa tsikaritra ny fahasamihafana. Ity DAC portable ity dia tsy vokatra mora vidy, 549 euro no vidiny rehefa mahatratra ny tsena, saingy azoko tsara fa ny kalitao dia voaloa. Azoko tsara ny nanandramako azy ireo nandritra ny fotoana kelikely. Ny fehin-kevitro momba izany, raha tsy misy ny fahafahako manao fanadihadiana feno kokoa momba ny vokatra RHA vaovao, dia nye ny asa vitan'ny ekipa RHA dia avo lenta Ary, raha mpitia mozika ianao dia fitaovana tsy azonao adino ity. Ary koa, miaraka amin'ny DACAMP L1 dia misy tarika elastika hametahana ny finday avo lenta amin'ny DAC azo entina ka toa tena ahazoana aina ny mitondra azy na aiza na aiza.
RHA CL1 sy RHA CL750
Ny traikefa tamin'ny DACAMP L1 dia nahavariana. Nanandrana aho miaraka amin'ny RHA CL1 sy ny RHA CL750 ary hitako fa avo dia avo ny kalitao, manasongadina indrindra ny CL1. Tsy hiresaka aminao momba ny fahasamihafana eo amin'ny kalitaon'ny feo eo amin'ny maodely iray sy ny iray hafa aho satria noho izany dia mila manao fitsapana maromaro aho ary amin'ny tsenambarotra dia tsy ny tontolo iainana tsara indrindra izany, fa ny fahafantarana ireo vahaolana RHA hafa fantatro. raha ny marina dia hamela tsirony be ao am-bavany amiko izy ireo.
Toetra ara-teknika RHA CL1
Mpamily manana vahaolana avo lenta miaraka amina mpamily ceramic CL Dynamic
Akorandriaka vita amin'ny kerobima vita amin'ny zrO2 manome kalitao avo lenta
Tariby misy rafitra manokana (sMMCX)
Ag4x tariby volafotsy fotony (4-pin Mini XLR) ary tariby OFC (3.5mm / 6.25mm) (samy tafiditra ao)
Fanohanana amin'ny sofina azo ovaina
11 ny earplugs silikonina XNUMX, kitapo mitondra ary kitapo fanadiovana
Ny famolavolana headphone dia mampatsiahy ahy ny RHA T20, na dia misy antsipiriany tena mahaliana aza: azo esorina tanteraka izy ireo. Ny antony? Miaraka amin'ny RHA CL1s dia misy tariby roa misy fifandraisana samihafa, fifandraisana 4-pin MINI XLR izay mifanaraka tanteraka amin'ny DACAMP L1 ary tariby hafa misy fifandraisana 3.5 mm mahazatra izay azontsika ampiasaina amin'ny DACAMP L1 sy amin'ny fitaovana hafa mifanentana. .
Gaga aho amin'ny vatan'ny headphones, vita amin'ny seramika. Tena mahafinaritra ilay fikasihana ary, na dia niahiahy momba ny fahalemen'izy ireo aza aho, ny marina dia rehefa avy nanohina azy ireo izy ireo dia toa nanohitra mafy. Miezaka ny manala ireo headphones amin'ny tariby iray aho hametrahana azy amin'ny hafa, hitako fa tena tsotra ilay rafitra ary azo atao tsy misy olana. Tiako ihany koa ny zava-misy, tsy toy ny finday avo lenta hafa, ny RHA CL1 dia tsy manana loha hafa arakaraka ny karazana mozika tianay hankafizinay. Izay no ilana ny Equaliser DACAMP L1. Ny tariby tsy misy ôksizenina an'ny RHA CL1 dia manome fahatsapana faharetana ary tena sarotra ny mihodina, noho izany dia mazava fa, toy ny mahazatra ao amin'ny orinasa, dia tsara sy mitandrina be ny endrika. hamely ny tsena amin'ny vidiny 459 Euros.
Ny toetra ara-teknikan'ny RHA CL750
Transducers CL Dynamic Ultra-band
Fiarovan-doha vita amin'ny vy tsy misy fangarony miaraka amina endrika Aerophonic ™ n
Tariby tsy misy oksizenina misy output 3.5mm na 6.25mm
Fanohanana amin'ny sofina malefaka
Kapila sofina silika 11 tsiroaroa, boaty mitondra
Amin'ity tranga ity dia hitantsika ny headset voaorina tsara manolotra ny endrika mampiavaka ny fakan-tsarimihetsika avo lenta an'ny RHA, mampatsiahy ny olona ankalazaina RHA MA750. Tsy toy ny CL1, amin'ity tranga ity dia vita amin'ny vy vy ny fiarovan-doha. Ny tariby tsy misy oxygen dia tsy mora mihodina koa, izay tiako manokana. Toy ny mahazatra ao amin'ny mpanamboatra, ity headset ity dia miaraka Kapila sofina 11 silika ka, arakaraka ny haben'ny lakandrenin'ny sofinay, dia misafidy ny vahaolana tsara indrindra izahay, ankoatry ny kitapo mitondra.
Fitsapana azy ireo vetivety dia tsapako fa, na eo aza ny vidiny efa ho 100 euro latsaka, ny fahasamihafana raha ampitahaina amin'ny RHA T20i dia tsy dia hita loatra. Vokatra mahagaga izay, raha tsy misy ny fitsapana azy amin'ny fotoana bebe kokoa, dia manolotra audio amin'ny haavon'ny headphones tsara sofina indrindra. Ny vidiny? hamely ny tsena mandritra ny volana Oktobra - Novambra amin'ny vidiny 149 euro.
Fahagagana lehibe amin'ireo vahaolana RHA vaovao, miaraka amin'ny DACAMP L1 eo alohan'izay, andalana vaovao misy vokatra premium indrindra izay mampiseho ny antony mahatonga an'i RHA ho lasa iray amin'ireo mari-pamantarana eo amin'ny tsenan'ny sofin-tsofina am-peo. Raha manana fotoana mety ianao, aza misalasala manandrana ny headphones RHA CL1 miaraka amin'ny DACAMP L1 satria mahavariana ny traikefa.
R Galeri Drafitra RHA DACAMP, RHA CL1 ary RHA CL750
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » IFA » RHA DACAMP L1, CL1 ary CL750, dia gaga anay ny mpanamboatra tamin'ny alàlan'ny fanolorana ny DAC voalohany miaraka amin'ny amplifier azo entina finday ho an'ny smartphone eny an-tsena
Lalao video karama vaovao 3 tsara ho an'ny Android
Lahatsary iray an'ny Bluboo Picasso 4G dia manamarina ny mampiavaka azy ara-teknika rehetra